Nhungamiro yedenga, inonakidza gwara yekutevera kudenga | IPhone nhau
Nhungamiro yedenga, inonakidza gwara yekutevera mudenga
Carlos Sanchez | | IPhone maapplication
NeChishanu kunouya kukwirisa kwevaPerseid (kunyangwe mumazuva apfuura uye mumashure isu tichakwanisawo kunakidzwa neiyi inoshamisa show kusvika padiki padanho) neiyo inotarisirwa mwero yakakwira kupfuura zana ZHR, izvo zvinoreva kuti kana isu tiri munzvimbo ine kusvibiswa kwechiedza kushoma uye nedenga rakajeka tinogona kuona mameteor maviri paawa kuyambuka mamiriro ekunze uye kusiya chiitiko chisingakanganwike chekuona. Uye kutora mukana wekuti iyo Pisuerga inopfuura nemuValladolid, hapana zvirinani pane kungotarisa imwe yeakanakisa ekuongorora nyeredzi muApp Store.
1 Kubatsira kukuru
2 Unhu hwehunyanzvi
3 Kukoshesa kwedu
Kana isu tasvika iyo Sky Guide tebhu mune iyo maapuro maapuro uye isu tinoona rondedzero uye zvakataurwa, zvakaoma kufunga kuti zviri nani kupfuura makwikwi, asi ndinokuvimbisa kuti pane.
Chekutanga chakanakira Sky Guide zvine chekuita nevakwikwidzi vayo ndizvo zvirimo: ichi chishandiso chine mifananidzo ingangoita makumi mana ezviuru zvekudenga kutiratidza chimiro chakakwana chayo, tichigadzira patinoishandisa pamwe ne iPhone chinzvimbo maseru hunhu hwemufananidzo patinenge tichifamba kuburikidza nedenga haringotsanangurike.
Uye zvakare, mashandiro echishandiso akaisvonaka, achikundikana pazviitiko zvishoma kwazvo uye nekuzvizivisa zvese kwavari kekutanga. zvinhu zvekusimbisa mudenga, chero kwatinenge tiri. Naizvozvo, rakanakira mhando dzese dzevashandisi, kubva pama novice kuenda kune nyanzvi.
Iko kuita, zvirinani pane rinotevera-chizvarwa iPhone, zvakare kunoshamisa uye kunokosha. Izvo hazvinamirwe chero nguva, shanduko dzese dzakatsetseka uye kutsvaga kwezvinhu kunoitwa nekukurumidza, zvichiratidza kuti vashandisa zvese matekinoroji anopiwa naApple saka kuti oparesheni yacho inyatso kukwana.
Zvekuisa chimwe chinhu pasi, pamwe font yakashandiswa mukushandisa iri rakakura kwazvo kana tikarifananidza neiro rinoshandiswa neApple uye nezvakawanda zvinoshandiswa, asi ichiri chinhu chisina basa kana tikachiisa pamwe nezvimwe zvinhu zvakanaka zvinopihwa neapp.
Saka zviri pachena kuti Fifthstarlabs inotipa chigadzirwa chemhando yepamusoro pamatanho ese, anokunda mukurumbira weApple Design Mubairo makore mashoma apfuura uyezve achishandurwa muchiSpanish (kuwedzera kune mimwe mitauro gumi). Zvakare kucherechedzwa kusangana neApple Watch (iyo inototitaridza inguva iyo ISS inopfuura). Chishamiso chetsinga dzinotenga zvine musoro, kunyanya mukupera kwesvondo dzinovimbisa kuva nzira huru yekutarisa denga mukubwinya kwaro kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nhungamiro yedenga, inonakidza gwara yekutevera mudenga
Izvi zvinobhadharwa. Kune akawanda maficha akasununguka uye akanaka kwazvo: nyeredzi Famba 2 pakati pevamwe.
Ichi chifananidzo chaizosimbisa iyo yekumanikidza-inonzwika Kubata ID yeiyo iPhone 7
Ekisodho inowedzera mubairo unosvika kumadhora mazana mashanu ezviuru ekutsvaga kushomeka muIOS